AH: Duel-Fuel Engines သို့မဟုတ် LNG ရွှေခတ် ရောက်ပြီလား ?
LNG ကို မတ်လ ၁၁ရက်နေ့ ဂျပန်ငလျှင်ကြောင့် ဖူကူရှီးမား အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ယိုစိမ့်မှု့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အစားထိုးလောင်စာတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတော်တော်များများ စဉ်းစားလာကြသည်။ တစ်နေ့နေ့တွင် ဓာတ်ဆီအစားထိုးလောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုလာဖွယ်ရှိသည့် အခြေအနေသို့ ဦးတည်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ယနေ့ Green-ship Technology ဟု အော်လာသံ တဖြည်းဖြည်းကျယ်လောင်လာသည်။ ဒါကလည်း LNG ကိုအသုံးပြုရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုပိုလာသည်။ ထို့ပြင် LNG ကို ၂၁ ရာစုတွင် လွယ်လင့်တကူ ရရှိလာနိုင်ကြသည်။ ဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါကလည်း LNG၏ဈေးနှုန်းကလည်း သက်သာသည်။
ထို့ပြင် ယနေ့ အချိန်တွင်လည်း Dual-fuel Engines များကို အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်လာကြပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါအင်ဂျင်များတွင် အောက်ပါ Safety Requirment များလိုအပ်သည်
Explosion protection for air and exhaust manifolds
Means to sample crankcase gas concentration and means of inerting
Exhaust system purge capability
No gas admission without pilot injection or spark ignition
Rapid (emergency) charge-over gas to fuel (DF engines)
Start and stop on diesel (DF engines)
Duel-Fuel Engine(LNG combined) အသုံးပြုသော သင်္ဘောများတွင် လိုအပ်လာမည့် အပိုင်းလေးများကို လေ့လာကြည့်နိုင်သည်။
LNG သိုလှောင်မည့် ကန်များ
LNG ကန်များ၏ Safety
Bunker Station Safety
Fuel gas များ သွယ်ဆက်ရာ ပိုက်လိုင်းများ၏ Safety ဟူ ၍ အဓိက ၅ ပိုင်းခွဲပြီး လေ့လာနိုင်သည်။
၁. LNG သိုလှောင်မည့်ကန်များ
LNG tanks များကို သင်္ဘောပေါ်သို့ တပ်ဆင်ရာတွင် IMO၏ International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) မှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးအစားများကို တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ ယေဘူယအားဖြင့်
- Membrane Tanks
- Independent Tank A,B & C ဟူ၍ အမျိုးအစားများရှိသည်။
၂. LNG ကန်များ၏ Safety
LNG သိုလှောင်သော ကန်များကို တည်ဆောက်ရာတွင် IGC Code နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Classification Society များ၏ စံနှုန်းများအတိုင်းတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကန်များကို Side shell မှာ B/5 အကွာအဝေး၊ သင်္ဘောအောက်ခြေမှ B/15 အကွာအဝေး နှင့် သင်္ဘော၏ မည့်သည့် အနားသတ်မှမဆို ၈၀၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးတွင် ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၄င်းသည် သင်္ဘောများ ထိခိုက်မှု့များ၊ သောင်တင်မှု့များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက LNG ကန်ကို မထိခိုက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင် LNG ကန်များကို Open Deck များတွင် တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သိုလှောင်ရာ အခန်းများတွင် ထားမည်ဆိုပါက Tank၏ Pressure ကို 10 bar အထိသာ ခွင့်ပြုသည်။ USCG requirement အရ LNG ကန်များကို လူနေခန်းများ၏ အောက်ရှိ အထပ်တွင် ထားရှိခွင့် မပြုပေ။ ထိုပြင် LNG သိုလှောင်ရာ ကန်၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိခိုက်မှု့ အန္တရာယ်များမှ လျှော့ပါစေရန် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
LNG tank များထားသိုရာ၏ ဘေးဘက်တွင် မီးလောင်ပါက ကန်များ၏ pressure ကို အလွန်အကျွံမြင့်တက်စေသည်
LNG tank များမှ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ပါက မီးလောင်စေနိုင်သကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲမှု့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
LNG tank များမှ cryogenic အရည်များ ယိုစိမ့်ပါက Structural failure ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Ref : 1. http://www.marinenewsasia.com/maritime-news/ "The Golden Age of LNG"
3. ABS Guides for Gas Fuel Ship (Presentation) by A.K Seah, Vice President, Environmental Solutions on5August 2011 - Singapore
Posted by AH at 8/16/2011 11:13:00 PM